Ingxowa yeRubber yoXinzelelo lweBelt Umatshini wokushicilela oVulekileyo
Ingxowa yoxinzelelo lweRabha yeAntai yamkela uyilo olupheleleyo lweerabha, akukho sakhelo sentsimbi, ukukhanya kunye noxinzelelo olusasazwe ngokulinganayo, ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo. Isetyenziswe koxinzelelo lwamanzi kunye nemoya yoxinzelelo lomoya. Yenziwe ngokuzimeleyo kwaye yaphuhliswa liziko lika-Antai le-R & D. Umgangatho kunye nokusebenza kuxatyiswa kakhulu kwiimarike ezahlukeneyo kwihlabathi liphela. Kukhetho olufanelekileyo ukuhambelana nomatshini wokushicilela weAlmex ngokugqibeleleyo.
Isebe lethu le-R & D lenkampani liye lahlala iminyaka emi-5 kwaye laphumelela ngempumelelo iingxowa zamanzi zoxinzelelo oluphezulu ngo-2005. Le teknoloji yotshintsho iye yazibhukuqa ngokupheleleyo zonke iintlobo zebhanti yokuhambisa ityhila itekhnoloji yeendaba kwaye yatshintsha indawo yakudala yokuhambisa ipleyiti ye-hydraulic. Iziphumo ezidibeneyo zifikelela kubude obutsha. "ANTAI" umatshini wokuqhafaza unesikhundla esiphambili kukhuphiswano lweemarike ngobuchwephesha bayo kunye nomgangatho ophezulu.
I-PU PVC Belt Vulcanizing Cofa kwiThermoplastic Belt Splice
Lo matshini upholileyo womoya unazo zonke izinto ezidityaniswe kwizixhobo esinye, ezenza ukuba umatshini ungene ngokulula kwaye ulungele ukusebenza. Ukukhawuleza ukusela kunye nokuhambisa, unokuzisa naphi na ngokulula.
Ijenali yeVulcanizing engasindi yeLibhu yokuhambisa iRubber
Ibhanti yokuhambisa irabha engasindi yokucinezela umatshini wokushicilela, oomatshini bokushicilela abayi-2, isitayile sesakhelo se-aluminium, eyenzelwe ukusebenza ngokukhawuleza nangokulula, kulula ukuya kuso nasiphi na isikhundla esinqwenelekayo se-splice, ukukhanya kunye nokusebenza kakuhle. S
Iifreyim ezimbini ezikhanyayo nezomeleleyo zealuminium zineenxalenye eziphezulu nezisezantsi zemithombo yeendaba. Ixhotyiswe ngezibambo ezisongekayo kumacala omabini esakhelo esiphezulu, kulula ukuhamba nokuhla. Ibhokisi yolawulo inolawulo lobushushu obubini, ixesha kunye nenkqubo yokubonisa.
Yenzelwe ukukhawulezisa ibhanti ekhawulezayo nethembekileyo;
Yomelele isakhelo sealuminium isitayile
Elula, iprinta yesakhelo ephathekayo;
Ukufudumeza ngokukhawuleza Inkqubo, sebenzisa izinto ezinokuthenjwa zokuFudumeza iiSilicone;
Inkqubo yokupholisa ngokukhawuleza efakwe kuyilo lweplaten, ukupholisa ukusuka kwi-145 ° C ukuya kwi-75 ° C, kuphela 5 imiz.